रोजगारी - प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : युवा वर्गमा अवसर र उत्साह
बनेपा । दश वर्ष मलेसियामा काम गरी फर्किएका मण्डनदेउपुर नगरपालिका–३ नयाँगाउँका सन्तबहादुर तामाङ यतिबेला गाउँमा नै काम गरिरहेका छन्। मलेसियामा श्रम गरेर फर्किएका उनले भने पैसा कमाउन नसकेको र श्रममात्रै गरेर खालीहात फर्कन बाध्य भएका थिए । हाल उनी नगरपालिकाले तोकिएको मापदण्डअनुसारको सडकको सीमाङ्कन तथा मर्मत गर्ने काममा अवसर पाएपछि यतिबेला सोही काममा व्यस्त भएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त नौ हजारभन्दा बढी पदका लागि माग गरेको विज्ञापनका लागि शनिबार दिउँसोसम्म साढे दुई लाखभन्दा बढीले फाराम भरेका छन् । असार ३ गतेसम्म फाराम भर्ने मिति तोकिएकोमा अनलाइन फाराम भर्न केही समस्या आएपछि आयोगले असार १० गतेसम्मका लागि अवधि थप गरेको छ । शनिबार दिनको साढे ३ बजेसम्म दुई लाख ५५ हजार ७२६ परीक्षार्थीले अनलाइन फाराम भरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
एनआईसी एशिया बैंकले एकैपटक माग्यो ४०० कर्मचारी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एकै पटक ४०० जना कर्मचारी माग गरेको छ । यसअघि ८६ कर्मचारीको माग गरि खुलाएको विज्ञापन म्याद सकिन नपाउँदै बैंकले थप ४०० जना कर्मचारी मागेको हो । बैंकले उपत्यकाभित्रका शाखा कार्यालयका लागि ५० जना शाखा प्रबन्धक मागेको छ । यस पदका लागि स्नातकोत्तर गरी कम्तिमा पनि १० वर्षको कार्यानुभव हुनु पर्ने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै ५० जना रिलेसनसिप म्यानेजर मागिएको छ । यसका लागि स्नातकोत्तर गरी बैंकिङ क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ५ वर्षको अनुभव र उमेर २१ वर्षदेखि ४० वर्ष हुनुपर्नेछ । सर्भिस म्यानेजर पदका लागि १०० जना कर्मचारी आह्वान गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आजदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरेको छ । वडा नम्बर २२ बाट शुरु गरिएको रोजगार कार्यक्रमको महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले उद्घाटन गरेका हुन्। सो अवसरमा प्रमुख दाहालले रोजगार आम नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको बताउँदै नागरिकको अधिकार र आवश्यकता पूरा गर्न महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनलाई रोजगारीसँग जोडेर समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन महानगरपालिका योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेको छ भने । महानगरपालिकाले सबै वडाहरुमा यो कार्यक्रम शुरु गर्दैछ ।	थप पढ्नुहोस्
भद्रपुर । नेपालमा पहिलोपल्ट बेरोजगारहरुलाई ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ दिने गरी शुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ झापामा प्रभावकारी देखिएको छ । पहेँलो हेल्मेट र ज्याकेट लगाएका युवाहरु औजार बोकेर निर्माणका काममा खटिँदा गाउँगाउँमा विकासको जागरण फैलिएको छ । झापामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारप्राप्त जनशक्तिलाई विद्यालयको रङरोगन, धार्मिक पर्यटकीयस्थलको सरसफाइलगायतका काममा परिचालन गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
मन्त्रीहरुले संसदमा आज जवाफ दिदै
काठमाडौँ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मन्त्रालगत रुपमा विनियोजन गरिएको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ आजदेखि सम्बन्धित मन्त्रीले दिँदैछन् । जेठ २८ गतेदेखि सुरु भएको मन्त्रालगत छलफल बिहीबार सकिएको थियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराका अनुसार शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । मन्त्री जवाफ दिएपछि मन्त्रालगत विनियोजको छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले पुरक प्रश्नसमेत सोध्न पाउने छन् ।	थप पढ्नुहोस्
युवालाई ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले छोएन, जेठमा नै उडे ४३ हजार विदेश !
काठमाडौं । बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने सरकारी घोषणालाई चुनौती दिँदै गत जेठ महीनामा ४३ हजार युवा विदेश उडेका छन् । स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेपनि जेठमा ४३ हजार ६५४ युवा कामको खोजीमा विदेशिए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, जेठमा ४० हजार ९०१ पुरुष र दुई हजार ७३५ महिला श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । गत महीना १७ हजार ४३१ पुरुष र एक हजार ५२१ महिला गरी १८ हजार ९५२ युवा संस्थागतरुपमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ । मजदूर आन्दोलनका कारण विगत छ दिनदेखि होटल सेवा प्रभावित भएको थियो । व्यावसायिक सुरक्षा नभएको भन्दै व्यवस्थापनले होटलको सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको व्यहोरासहितको पत्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पठाएको छ । सेवा सुविधा र सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरणको माग गर्दै मजदूरले गत जेठ ३० गतेदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । व्यवस्थापन पक्षले भने मजदूर बिनाशर्त काममा फर्किनुपर्ने अडान लिएको छ । दुवै पक्षको अडानका कारण होटल बन्द भएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
लोक सेवाले थप्यो स्थानीय तहको विज्ञापनमा दरखास्त दिने म्याद
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि आह्वान भएको विज्ञापनमा आवेदन दिने म्याद थप गरेको छ । आयोगले असार १० गतेसम्मका लागि आवेदन फर्म भर्ने म्याद थप गरेको हो । दरखास्तका लागि आवेदन दिने समय सकिने अघिल्लो दिन सर्भरमा चाप बढेर दरखास्त अपलोड गर्न समस्या भएपछि आयोगले म्याद थप गरेको हो । यसअघि आयोगले दरखास्त दिनका लागि मंगलबारसम्म अन्तिम मिति तोकेको थियो । ५१५ स्थानीय तहका लागि आयोगले विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि आवेदन माग गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आ.व.२०७६/०७७ मा ५ लाख युवालाई रोजगार दिने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेपनी वास्तविकतामा भने त्यसो नभएको पाइएको छ । देशभरनै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागुभएपनि कँही झार उखेल्ने,सडकका गाई, बाँदर धपाउने त कँही मकै गोड्ने काम गरेर सरकारी सम्पत्तीको. दुरुपयोग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदले वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ‘पपुलर’ भनिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई ‘बेल्चाले मकै गोड्ने काम’को संज्ञा दिएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्